၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံ။ – SoShwe
Home/Other/၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံ။
admin June 21, 2020	Other Leaveacomment
CNN သတငျးဌာနရဲ့ ထုတျပွနျကွငွောခကျြအရ ဖငျလနျနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာ့ပြျောစရာအကောငျးဆုံးနိုငျငံဖွဈတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ ဖငျလနျနိုငျငံဟာ ဘယျလိုအကွောငျးတှကွေောငျ့ အခုလိုမြိုး သတျမှတျခံခဲ့ရတာလဲ ? ? ?
ဖငျလနျနိုငျငံဟာ အစားအသောကျကောငျးတှကေို တီထှငျဖနျတီးတတျခွငျး၊ အထငျကွီးဖှယျကောငျးသော မွောကျဖကျစှနျးဒသေရဲ့ ခမျးနားထညျဝါတဲ့ အလှအပတှနေဲ့ နှငျးတှတေဈခြိနျလုံး ဖုံးလှမျးပွီး နထေိုငျခငျြစရာကောငျးလောကျအောငျ ဆှဲဆောငျမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ။ အခုလိုမြိုး ဖငျလနျနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာ့ပြျောစရာအကောငျးဆုံးနိုငျငံအဖွဈ ၂ နှဈဆကျတိုကျ ရှေးခယျြခံရခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဖငျလနျနိုငျငံရဲ့နောကျမှာတော့ ဒိနျးမတျ၊ နျောဝေ၊ အိုကျစလနျနဲ့ နယျသာလနျနိုငျငံတို့က အစဉျအတိုငျးရှိနပေါတယျ။
အခုလိုမြိုး ကမ်ဘာ့ပြျောစရာအကောငျးဆုံးနိုငျငံအဖွဈ သတျမှတျတဲ့နရောမှာ အဓိကအားဖွငျ့ နိုငျငံသားတှရေဲ့ တဈဦးခငျြးဝငျငှေ၊ ကိုယျပိုငျလှတျလပျခှငျ့ရှိခွငျး၊ တဈဦးနဲ့တဈဦး ယုံကွညျစိတျခမြှု၊ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျမှုတို့အပွငျ လူမှုရေးထောကျပံ့မှုတှနေဲ့ ရကျရောစှာ ပေးကမျးလှူဒါနျးခွငျး စတဲ့အခကျြတှအေပျေါ အခွခေံပွီး ရှေးခယျြသတျမှတျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
ထိပျဆုံးနိုငျငံ ၁၀ နိုငျငံကို အထကျမှာဖျောပွထားတဲ့ အခကျြတှနေဲ့သာမက လူတဈဦးခငျြးစီရဲ့ စိတျနသေဘောထားတှနေဲ့လညျး အဆငျ့သတျမှတျခဲ့ခွငျးဖွဈတယျဆိုပွီး University of British Columbia မှ ပရောဖကျဆာ John Helliwell ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ သိရှိရပါတယျ။
CNN သတင်းဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် အခုလိုမျိုး သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာလဲ ? ? ?
ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ အစားအသောက်ကောင်းတွေကို တီထွင်ဖန်တီးတတ်ခြင်း၊ အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသော မြောက်ဖက်စွန်းဒေသရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ အလှအပတွေနဲ့ နှင်းတွေတစ်ချိန်လုံး ဖုံးလွှမ်းပြီး နေထိုင်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ၂ နှစ်ဆက်တိုက် ရွေးချယ်ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့နောက်မှာတော့ ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေ၊ အိုက်စလန်နဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့က အစဉ်အတိုင်းရှိနေပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိခြင်း၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုတို့အပြင် လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ ရက်ရောစွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း စတဲ့အချက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံကို အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့သာမက လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး University of British Columbia မှ ပရောဖက်ဆာ John Helliwell ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါတယ်။
Previous ကမ္ဘာကျော် Celebrity တွေရဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ပုံစံနဲ့ ယခုပုံစံ ကွားခြားချက်။
Next သတငျးမီဒီယာဝကျဘျဆိုဒျတှနေဲ့ Facebook အကွား အကြိုးအမွတျဝမြှေခှငျ့ဥပဒအေသဈ။